Waqooyiga Yaa La Xasuuqay? Yaa Wax Xasuuqay | allsanaag
Waqooyiga Yaa La Xasuuqay? Yaa Wax Xasuuqay
Markii ay sheekadu ku xumaato Xaalkoodu waa inay Xabalaha soo qufaan
Maydadka Hargaysa oo xabaalaha laga soo qufayo yey yihiin? Shacbi Soomaaliyeed oo cid kasta le ayaa Dawlada iyo SNM labadoodab xaq daro ku dileen.
(ALLSANAAG) Dagalaadii Waqooyiga ka dhacay shacab badan ayaa SNM iyo dawladuba ku gumaadeen. Sida dawladii waqtigaa jirtay qof kasta oo ay uga shakido inuu SNM gacan la yeelan karo dembiile uga soo qaadi jirtay ayaa iyana sidoo kale SNM qof kasta oo ay uga shakido inuu dawlada gacan la yeelan karo dembiile uga soo qaadi jirtay. Labaduba dadkaa ay dembiilayaasha ka dhigeen siday doonaan bay ka yeeli jireen.
Maadaama SNM maalmahan ay warar la xidhiidha qabuuraha laga helay Hargeysa ay ka soo qaadeen iney dawladii hore keligeed ka dambeysay, waxa isweydiin le suura gal ma tahay in dadkan la laayey iyagu xitaa layn karaan qaarkood ama wada layn karaan. Markay SNM magaalada soo gashay dadku hadba dhinac buu u yaacayey, xilligaa oo dawlada iyo SNM hadba meela kala riixanayeen.
SNM xasuuq qabyaalad ku saleysan ayey waxay ku sameeyeen shacbi badan, qaarkoodna qaxooti ahaa, oo ka soo jeeda qabaa’ilada kale iyo dad qaxooti ah oo Oromo ah. Xilligaa qaxootigii Ogaadeeniya ka soo carraray, ka dib dagaaladii 1977kii, iyo Mingiste xasuuqiisii ee xeryaha Waqooyiga ku jiray, SNM waxay ku doodi jirtay in dhulka Isaaqa ay xukuumada Siyaad Barre dejinayso. SNM iyagoo taa rumeysan ayey markay Waqooyiga soo galeen haddana dadkaa u xasuuqeen iney ciidan u yihiin dawlada Soomaaliyeed. Intay xeryihii qaxootigaasi ku jireen SNM galaan ayey dadka ka ururin jireen oo kala bixin jireen oo markaa sida xoolaha u layn jireen.
Xasuuqa SNM kuma koobneyn dadkii xeryaha qaxootiga iyo magaalada Hargeisa laga ururiyey. Goboloda Awdal, Sanaag iyo Sool waxay SNM ku qaaday weeraro gardaro ah iyagoo dumar iyo carruur ku gumaaday.
Meydadkan Hargeisa laga helay DNAdooda ha la baadho si loo ogaado in ay yihiin dumarkii, carruurtii iyo shacabkii SNM gumaaday iyo iney yihiin dumarkii, carruurtii iyo shacabkii dawladu gumaaday.
Baadhitaanka ha lagu daro khubaro lafahaa caddeymo ka qaadeysa oo dabadeed ehelada maanta ku sugan Waqooyi Galbeed, Ogaadeeniya iyo meelaha kale ee adduunka, ee dadkoodii lagu gumaaday dagaaladii Waqooyiga, iyagana ha laga soo qaado DNA.
Marka caddeymaha DNAdaa ka soo baxa ay noqdaan Soomaali meela kala duwan ka soo jeeda, waxa caddaan doonta in madaxdii dawlada iyo madaxdii SNM labadooduba dadka laayeen; marka DNAdoodu noqdaan dad wada Isaaq, waxa caddaaneysa in dawladii hore madaxdeedii dembiilayaal yihiin; marka dadkaa DNAdoodu noqdaan dad badankiisu Ogaadeeniya ka soo jeeda iyo Soomaali kale iyo Oromo qaxooti ahaa, waxa caddaaneysa in madaxda SNM dembiilayaal yihiin.
SNM shacab masaakiina yay ku xasuuqday iney Darood yihiin ama askar Daarood yihiin, cid kasta ha ka soo jeedeene, oo ku eedeysay in ay ciidanka dawlada gacan siinayaan. Xitaa qaxooti Oromo ah oo masaakiina ayaa SNM u xasuuqday in ay iyana ciidanka dawlada gacan siinayaan xilligaa. Dhiiga bani’aadanka labada qoloba waxay u cabayeen sida biyaha.
Baadhitaanka yaan dhan keliya lala aadiin. Miskiinka qaxootiga Soomaaliga ah iyo miskiinka shacbiga Isaaqa ee gacanta ka gardareyd dishay, labaduba xaq bay u leeyihiin caddaalad. Gacan ku dhiiglayaasha, SNM iyo dawlada kay doonaan ha noqdeene, yaan la kala saarin.
← Somali ma yaqaaniin Go’aamadii Shirkii 1992 ee Hadaaftimo →